Achọrọ m braị egwuregwu ịgba ịnyịnya ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Gba ígwè na-agba ọsọ - azịza na ajụjụ dị iche iche
Gba ígwè na-agba ọsọ - azịza na ajụjụ dị iche iche
Achọrọ m braị egwuregwu ịgba ịnyịnya ígwè?
Maka ọtụtụ ụzọndị na-agba ịnyịnya ígwè, a ala- na-ajụ- mmetụtaegwuregwu ara kwesịrịezuo. Ọ bụrụ na ị na-ewere nke gịigwe kwụ otu ebena ụzọ ụkwụ na singletrack mpaghara, mmetụta dị elubra kwesịrịnye gị ego kwesịrị nkwado. Bust size ga-ekpebi ọkwa nkwado gịmkpanke giegwuregwu dị mma.17bọchị 17 2021
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ n’ịgba ịnyịnya ígwè na ịmaghị na ị gha bụrụ onye ọchịagha ma ọ bụ na ị na-achọ ndụmọdụ bara uru, edemede a bụ mpempe akwụkwọ dị mkpa maka gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge niile na igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na ọ bụ mmiri na oyi na-atụ n'èzí, mgbe ahụ na ọ bụ ya mere ezigbo maka na-ekpo ọkụ na ịhazi okpomọkụ. Ma mgbe ọ na-ekpo ọkụ n’èzí, ihe dị fechaa dị ka nke a dị mma iji mee ka ị dị jụụ ma nwee ahụ iru ala karịa.
Ma ha na-arụkwa ọrụ ọzọ na nke ahụ bụ ihe mkpuchi ọzọ na-emetụta nchedo, ọbụlagodi nke dị gịrịị ka nke a nwere ike ịchekwa akpụkpọ gị. Tụkwasa m obi, anyị maara na anyị dara ntakịrị. Ma ọ dịkarịa ala, enwere m - Anyị anaghị ahụ uru niile na-eji ha, mana uwe aka bụ ezigbo akụrụngwa.
Ha na-echebe aka gị ma ọ bụrụ na ị daa, ha na-eme ka aka gị dịkwuo mfe na njem ndị ahụ dị ogologo, ma mgbe ọ na-ekpo oke ọkụ na njem ndị ahụ dị ọkụ, ha na-enyere gị aka ịpụ ọsụsọ n'egedege ihu gị. Ma mgbe ha batara n’onwe ha n’oge oyi. Na-ahụ ka ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-akụ naanị okporo ụzọ dị iche iche, mana mgbe ị banyere n'ime mkpuchi ihu igwe, ikuku na-enweghị mmiri, ọ ga-agbanwe ahụmịhe ịgba ígwè gị n'oge oyi.
Ezigbo Na-enweghị ya, efunahụ m, ihe ọ bụghị onye ọ bụla na-agba ịnyịnya ga-atụle uwe dị fere fere fere fere. Ihe ndị a bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala n'oge opupu ihe ubi ma ọ bụ na-ada n'oge okpomọkụ na-agbanwe.
Nwere ike imeghe ha ma mee ka ha mepee, mana ha pere mpe ma nwee ọkụ zuru oke iji zụọ ma dị mfe n’akpa azụ. Ọtụtụ n'ime ndị kasị mma na-eku ume, ma na mberede, ọ dịghị ihe na-eguzo n'ụzọ nke akpa rọba n'okpuru uwe gị. - A Dụ ma nwee obi ụtọ bụ okwu ochie ahụ.
Nke ahụ metụtakwara igwe kwụ otu ebe. Inwe mmiri na arụmọrụ gị ga-ata ahụhụ, mkpali gị ga-ada ma usoro mgbochi gị ga-ada n'akụkụ ụzọ. Oge nkwụsị oge niile bụ isi, ọkachasị nkeji ise na mbido ịnya gị dịka ahụ gị na-anabata mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ.
Mmiri abụghị ezigbo mmiri kacha mma ịmegharị. A na-ahazi taabụ electrolyte iji nyefee electrolytes nke ahụ gị chọrọ ma ọ na-adị mfe nghọta. Ọfọn, gbanye mmanụ, ọ dịkwa ka hydration, mana ahụ nwere ike ịga ogologo oge na-enweghị nri karịa enweghị mmiri mmiri.
Ọ dị mma, ọ bụrụ na ị gafere ogologo oge karịa 90 nkeji oge gaa mmanya Ọ bara uru n'ezie, ọkachasị na nkeji iri anọ na ise, ọ bụ ọrụ iji rie ezigbo nri ma ọ bụ ọbụlagodi barandan na-enye gị ga-enyere aka gafere njedebe nke nnọkọ. Ya mere gafere akara nkeji iri anọ na ise, rie nri ọ bụla nkeji iri abụọ ọ bụla. Nke a ga - eme ka arụmọrụ gị na ikike gị ịkwagide mgbali ahụ ma nyere gị aka iwulite metabolism gị, ọ bụkwa nnukwu ụgwọ ọrụ na njem ahụ. - Mgbe ị na-akwado ụzọ gị, gbaa mbọ hụ na ị nọrọ nso na ị ga-eji ihe dịka okirikiri gburugburu ebe ị bi ma ọ bụ ọbụlagodi ọnụọgụ asatọ iji nye gị ụzọ ọ bụrụ na ike gwụ gị ma ị nwekwaghị ike ịme ya.
Onweghi ihe dị njọ karịa ịnọ kilomita site n'ụlọ na-alọghachighị, mana ka ị na-enwekwu obi ike na nka gị, ị nwere ike ị nweta ọfụma na ịhazi ụzọ - Otu n'ime ihe ukwu banyere ịgba ịnyịnya ígwè bụ agbada, na ụzọ iji nweta ezigbo Ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-eme mkpatụ mgbe ọkwa ahụ gbanwere, mana ịchọrọ ime ihe dị iche. Zuo ike ma nwee obi uto.
A sị ka e kwuwe, ị nọrọ ogologo oge na nzuko ahụ mgbe ahụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ịkwanye ókèala na iti mkpu n'ime ntụgharị, mana ịgbada na ịnụ ụtọ izu ike bụ ụzọ kachasị mma iji gbaghaa iji pụọ. Kwadobe gị n’ebe ahụ iji nyere gị aka, mana ọ bụrụ na ị nweghị mmasị na mgbatị gị na igwe kwụ otu ebe gị, ha ga-adị mfe ịgbanwe ma ha dịkwa ọnụ ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Igbe gị dị ebe ahụ iji mee ka agbụ gị dị mfe ma ọ bụ sie ike karị, mana ọ kachasị mma iji nyere gị aka ịnweta ụdị mbara ala ị ga-agba.
Site n’ugwu gaa na mbara ọzara. - Ọ bụ naanị otu ihe dị njọ karịa ịsachaghị gia gị ma ọlị. Ee, amaara m na ọ bụrụ na ị sachị akụrụngwa gị, ọ ga - emepụta nje na ngwa gị ga - esi ísì nke pụtara na ọ nweghị onye chọrọ ịnya gị gburugburu, mana ọ bụrụ na ị sachapụchaghị ihe niile ehichachara mgbe ị sachara aka gị, ị 'Adị m ka ụfụfụ.
Mgbe m chetara ụbọchị ndị amateur m ma chee banyere agbụrụ agbụrụ anyị mere ebe akụrụngwa ahụ mara ezigbo mma ma anyị niile ga-eji aka anyị asacha ngwa anyị, mmiri ụbọchị ndị ahụ bụ otu ndị ọkwọ ụgbọala abụọ ma ọ bụ abụọ. ikpere na-awagharị na akpụkpọ ụkwụ na akwa mmiri n'ihi na ha asachapụghị ihe niile ahụ n'acha akwa ha mgbe ha sachara aka ha na nsị ahụ n'abalị ahụ. Na n’ikpeazụ nnukwu. Etinyela uwe ime.
Ọ dịkarịa ala, ọ bụghị n'okpuru ihe igwe kwụ otu ebe, ya bụ. Ezubere igwe akụrụngwa nke oge a ịmakụ akpụkpọ gị n'enweghị nsogbu ọ bụla na-enweghị mkpa ka ị tinye ihe ọ bụla n'etiti ya, ọ ga - eme ka ọ ghara ịdị na nke ahụ ga - abụ ihe na - enweghị obi iru ala na mgbe ị malitere ịmalite ọsụsọ, nke ọma, uwe ime gị abụghị nke e mere ka ọ bụrụ antibacterial igwe kwụ otu ebe bụ, yabụ nke ahụ ga - akpata nsogbu niile nke aka ya. E kwuwerị, ọ dị ka ihe adịghị mma.
Emere igwe igwe igwe iji nwee nhicha dị ọcha, na-enweghị ntụpọ n'ebughị agha. N'ezie ọ bụghị na-akpụ akpụ akụkụ. Ya mere Hapụ nke ahụ na uwe ahụ, ya na ndepụta anyị nwere eziokwu.- Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, nye ya nnukwu mkpịsị aka gị ọkachasị ma ọ bụrụ na ị hụkwara na ọ bara uru.- Ee, wee pịa maka etu esi edepụta You. Ebe ahụ.
Kedu bra nke kachasị mma maka ịgba ịnyịnya ígwè?
Kacha mmabras makaịgba ígwè
Ọmarịcha Tere Tamer si Lululemon bụ otu n'ime ọkacha mmasị anyị maka ụmụ nwanyị lululemon nwere nnukwu nsogbu.
Egwuregwu PanacheỌ dị mmana-aga ruo 34J Panache.
Ezubere maka egwuregwu na ịgba ọsọ dị egwu, Shock Absorber na-enye mkpọ ma ghara ịhapụ ha ka ha kwụsị Shock Absorber.
Enwere ọtụtụ ihe gbasara ịgba ịnyịnya ígwè bụ otu maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, mana otu mpaghara ebe anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ esemokwu dị na uwe, nke pụtara ìhè n'ezie n'ihi na enwere ụfọdụ ndịiche dị mkpa n'ụdị ahụ. Ya mere, ka anyị lee ka esi agbanwe gia gị ma ọ bụrụ na ị bụ nwanyị. (dramatic bangs bangs) Ana m enweta ọtụtụ ajụjụ site na ụmụ nwanyị ndị na-amalite ịgba ịnyịnya ígwè banyere kedu ihe kacha mma igwe kwụ otu ebe? Ma n'ezie, enwere oke nhọrọ n'ebe ahụ nke na ọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya.
Mgbe ụfọdụ, uru na ọghọm nke ụdị ụfọdụ nke gia na-apụtaghị ìhè ruo mgbe ị mere njem ole na ole. Yabụ nke a bụ eziokwu, ọ dị mma, eziokwu m, gbasara nhọrọ akụrụngwa maka ụmụ nwanyị. (na-ada ụda music) Uwe ị na-eyi n’elu igwe kwụ otu ebe bụ otu n’ime ihe ndị kachasị mkpa na-emetụta nkasi obi gị.
Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ndụ ka ị na-agba ịnyịnya ígwè, ọ dị mkpa ka ị nwee ahụ iru ala na ya. Ọfọn, akụkụ ya kwesịrị ịdị mma nke ọma, n'ezie, n'ihi na ka anyị chee ya ihu, onye ọ bụla chọrọ ka ọ dị mma. Ma na-achọ mma bụ bụghị dị ka ihe dị mkpa maka ego m dị ka nke ọma, nke bụ n'ezie dị ka mma maka m.
Ngwa gị bụ ihe dị na kọntaktị gị na akpụkpọ ahụ gị, nke ahụ na karịa oche oche niile, ihe mkpuchi, mkpụmkpụ, mee ka ọ bụrụ ihe mbụ na-akụ gị na igwe kwụ otu ebe. Tụkwasị na nke a, uwe gị na-echebe gị pụọ na mmetụta ndị dị n'èzí, ọ bụrụ na ọ bụ anyanwụ, mmiri ozuzo, snow ma ọ bụ na-atụghị anya n'okporo ụzọ, ọ bụrụ na ị daa ntakịrị ọdịda ọ bụla ugbu a (ịgba ịnyịnya ígwè) O yiri ka m nwere ọ dịkarịa ala otu ọdịda otu ọnwa. Uwe a na-agba ịnyịnya ígwè nke ị na-achọghị yourchọta igwe kwụ otu ebe gị ma ọ bụ nke na-adịghị echebe gị pụọ na ihe ndị dị na mbara igwe, ga-ahapụ gị nhụjuanya n'okporo ụzọ, mana ọ bụ nhọrọ nke onwe dị ka ihe dị mma, ọbụlagodi m.
Ka anyị banye nkọwa. (egwu dị jụụ) Nke mbụ na-agba ịnyịnya ígwè. Ọ dabara nke ọma, n'oge a abụghị nke ajị anụ a kpara akpa, kama ọ bụ ezigbo Lycra.
Ugbu a, ekwesịrị m ikweta na m bụ onye na-achọ akwa na-amasịkarị m, mana m na-ahọrọkarị uwe mwụda dabara adaba na akwa lycra. Otú ọ dị, ụdị a na-ejide onwe ya bụ ihe dị ezigbo mma na igwe kwụ otu ebe n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ bụ ihe aerodynamic, nke dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ngwa ngwa, ọ na-egbochi gị jersey na-agba gburugburu n'ihi ihe niile dị n'azụ gị akpa ebe ị na-edebe nri gị, mgbapụta gị, ekwentị gị. Yabụ na igwe kwụ otu ebe ọ dị mma ịmachi ọnụ.
Jiri igwe ịgba ịnyịnya ígwè gị, ị nwere ọtụtụ nhọrọ. Nke mbụ, ị nwere ogologo aka uwe maka oyi, obere aka uwe maka okpomọkụ, mkpọchi zuru ezu na ụfọdụ uwe mwụda nwere ọkara ogologo, m na-anụ ka ị na-ajụ, gịnị kpatara mkpọchi ma ọlị? Ọfọn, zipa zuru oke na-eme ka o kwe omume Ikwesiri imeghe jersey gị kpamkpam ka ị yikwasị ya ma wepụ ya, yana kwa ịjụ oyi mgbe ọ dị ọkụ. Nkeji ọkara zipa bụ ntakịrị ikuku, mana ọ na-agbasi mbọ ike mgbe ị na-agbanwe.
na-ehi ụra n'ihe ndina
N'ezie, ị nwekwara ike iyi uwe na-agba ịnyịnya ígwè na-enweghị zipa, ọ na-esiri gị ike itinye. Onwe m, echere m na uwe nwoke ma ọ bụ nke unisex na-aga nke ọma, belụsọ na ha na-adịkarị ogologo, nke pụtara na akpa ahụ kwụgidere na azụ, nke anaghị adị mma. (Ezigbo egwu) Na-esote, ịgba ịnyịnya.
Nke a bụ isiokwu dị oke mkpa, yabụ nwee oche ma nwee ntụsara ahụ maka nkọwa ụfọdụ. Ka anyị buru ụzọ kwuo maka oche oche. Ugbu a nke a bụ padding na uwe dị mkpụmkpụ nke na-echebe chassis gị site na sadulu.
Igwe akwa dị elu, dịka ọ dị na UMA GT ndị dị mkpụmkpụ, ma ọ bụ nke a bụ ụmụ nwanyị LaalaLai dị iche iche si ASSOS. Ọ nwere ike inyere gị aka ịnọdụ ala na oche maka ogologo ụbọchị. E nwere ụdị mkpụmkpụ dị iche iche na ọdịdị na ọkpụrụkpụ nke oche mpe mpe akwa.
Ugbu a, ọ bụ ụmụ obere uwe emere ụmụ nwanyị na pads oche kaara gị mma? Ikekwe, mana ọ bụchaghị. Dịka ọmụmaatụ, achọpụtara m na ụfọdụ obere uwe ụmụ nwanyị na-akpa oke dị egwu, mana ọ bụ ụfọdụ obere unisex. Ihe dị mkpa bụ ịchọta ihe ga-adabara gị na nke dị mkpụmkpụ gị dabara nke ọma yana oche oche ahụ dabara nke ọma. nke ahụ anaghị agagharị mgbe ị na-anya ụgbọala.
Ugbu a, anyị abịakwute uwe ime, ụfọdụ ndị ga-achọpụta nke ahụ jọgburu onwe ya, mana ee e, ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè anaghị eyi uwe ime n'okpuru uwe mkpụmkpụ ha. Ugbu a enwere m ike ịhụ otu nke a si dị ịtụnanya, m ka nwere ike icheta na ụjọ tụrụ m mgbe m chọpụtara na ọ laghachitere mgbe m malitere ịnya igwe ma ihe bụ na uwe ime bụ naanị mgbakwunye ebe esemokwu na esemokwu na-emepụta ebe ọ kacha mkpa. Chafing dị njọ, yabụ na ị chọghị uwe ime ọ bụla, naanị ị ga-asacha obere ịnyịnya ígwè gị ma emesịa ị ga-asacha ọ bụla ịnya. Ugbu a anyị bịara ajụjụ ọzọ dị mkpa, ọkara ma ọ bụ obere nịịka. Bib shorts nwere sistemụ nkwado a iji jide ha ma ị nwere ike ịnọ na-eche ihe kpatara eji agba ịnyịnya ígwè na ndị na-akwụsi ike? Ihe kpatara nke a bụ na mgbe ị nwere ndị nkwụsịtụ, ị chọghị akwa n'úkwù, nke ụfọdụ na-ahụ erughị ala mgbe ha hulatara na igwe kwụ otu ebe.
N'aka nke ọzọ, jiri ọkpa úkwù gị, ị nwere ike jiri obi eziokwu wepụ ha karịa ngwa ngwa karịa n'ihi na ị gaghị emepee jersey gị, buru ụzọ kpochapụ mkpirisi, ndị a nwere ike ịbụ sekọnd dị oke ọnụ ahịa ị ga-efunahụ mgbe ị nọ na-achọsi ụlọ mposi ike. (egwu dị jụụ) Ugbu a, anyị abịakwute ndị uwe ojii, nke a na-eyikarị n'okpuru uwe ịgba ịnyịnya ígwè, ọ bụghị naanị mkpuchi, kamakwa, na nke a dị ezigbo mkpa iji gbochie a beụ na anụ ọhịa ka ha ghara ịfefe. Ahụmahụ na-enweghị ahụ iru ala, enwere m ike ịgwa gị, ihe mkpuchi na-abịa n'ụdị na ọdịdị na nha dị iche iche, dịka ọmụmaatụ nke a bụ ihe nkiri akpụkpọ anụ nke oge okpomọkụ site na ASSOS, ọ dị ezigbo mkpa ma na-agba ọsụsọ na akpụkpọ gị, ebe nke a bụ mmiri mmiri / mgbụsị akwụkwọ ASSOS. evo7 baselayer, o nweghi ihe doro anya ogologo aka uwe, kamakwa ọ dị ezigbo mkpa ma bụrụ nke a gwara mmanụ iji mee ka ị kpoo ọkụ n'ụtụtụ ụtụtụ.
Enwere otutu ụdị gloves dị iche iche maka ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, site na ogwe aka ọzụzụ oge ọkọchị na mkpịsị aka dị mkpirikpi ruo neoprene maka mmiri ozuzo iji mee ka aka gị kpoo ọkụ, ikuku anaghị egbochi ya mgbe oyi na-atụ mana mmiri anaghị ezo, ndị a bụ ndị m bụ ọkacha mmasị bụ tiBuru mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ oge opupu ihe ubi, ha dị ezigbo mkpa ma dị mma ma na-ekpo ọkụ na ọbụlagodi nwere mkpịsị mkpịsị aka na mkpịsị aka aka ka ị nwee ike iji ekwentị gị na-enweghị wepụ ha. (egwu siri ike) ngwa. Enwere ọtụtụ ngwa na ịgba ígwè.
Nke a abughi ihe nduzi zuru oke, kama ọ bụ naanị nyocha ngwa ngwa; ka anyị kwatuo ya n'ime mmiri ozuzo ngwa ma na-na-na-ekpo ọkụ ngwa; mgbe ụfọdụ ị chọrọ ha abụọ. Iji maa atụ, nke a bụ jaket sturmPrinz evo ASSOS, nke na-egbochi mmiri ọ bụla ma mee ka ị kpọọ nkụ n'ọnọdụ oke mmiri ozuzo. Could nwere ike iji okpu mmiri ozuzo mee ka mmiri ozuzo ghara ịpụ n'anya gị mgbe ebili mmiri, ọ bụ ezie na nke a bụ UMA GT wind jaket Ugbu a ọ bụghị mmiri na-enweghị mmiri, mana ọ na-enweghị ikuku ọ bụla na ọ na-ebu obere pere mpe karịa jaket mmiri ozuzo.
Mgbe ahụ, anyị nwekwara okpomoku ikpere, ndị na-ekpo ọkụ ụkwụ, ndị na-ekpo ọkụ ogwe aka, ndị a bụ ụzọ dị iche iche dị iche iche iji kpoo ọkụ mgbe ọ dị jụụ n'ụtụtụ ma ọ bụ mgbede, dịka ọmụmaatụ. Can nwere ike iwepụ ha mgbe ọ dị ọkụ ma ịchọrọ aka obere aka. Gagharị na gị nwekwara akpụkpọ ụkwụ nkwonkwo ụkwụ nke na-agabiga akpụkpọ ụkwụ gị na sọks ka mkpịsị ụkwụ gị nwee ọkụ.
Dị nnọọ irè. E nwekwara nsụgharị mmiri. Na n'ezie akwa a pụrụ ịdabere na ya iji mee ka ntị gị na isi kpoo ọkụ n'oge oyi. (egwu siri ike) Sock ogologo bụ ihe ịtụnanya na-ekpo ọkụ banyere mkparịta ụka n'etiti ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enwe mmasị ịkwa emo maka ihe egwuregwu maka ịghara ịkpụ sọks ma ọlị.
N'ezie, ọ dị oge n'ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ mgbe ọ bụ ejiji ejiji sọks sọks ogologo nke na ha ruru ikpere, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị m. Ma ugbu a na ụfọdụ uru apụtawo n'ụzọ dị otú a na ha na-ahọrọ sọks dị mkpụmkpụ na ọzụzụ iji zere eriri nwa ehi, echere m na onye ọ bụla na-agba ịnyịnya ígwè ga-enwe ike ikwu eziokwu na mpako maka ụdị sọks ọ bụla ha họọrọ. (egwu siri ike) Ma ugbu a gaa n'ụdị, onye na-echekwa ụdị ahụ? Ọ dị mma, ịke dị mkpa maka anyị niile.
Mana ihe bụ, ọ dị mkpa karịa inwe obi ụtọ na ịnụ ụtọ igwe kwụ otu ebe karịa ile anya. E nwere ụfọdụ n'ezie, n'ezie nkecha na classy ịnyịnya uwe maka ụmụ nwanyị si n'ebe, Otú ọ dị, na ha na-arụ ọrụ kwa, ya mere, gịnị na-atọ gị ụtọ dị ka ị dị na igwe kwụ otu ebe? Enwere m olileanya na isiokwu a ga - enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị nọ n’ọnọdụ nsogbu banyere ụdị ụdị nịịka ma ọ bụ nke ịcha akwa ị ga - ahọrọ, gịnị mere ị ga - eji mee ka anyị mata n’okwu ndị ị ga - ahọrọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụta ngwa ahịa ASSOS GCN anyị dị ịtụnanya, ị nwere ike ịchọta ya site na ịpị na ụlọ ahịa ahụ wee hụ otu ASSOS si eme uwe mara mma ịgba ịnyịnya site na ikiri edemede a ebe a n’okpuru.
Ọ dị njọ iyi naanị braị egwuregwu?
Isi Ihe: EmelaYiri uwekaEgwuregwu Bra* All * Daybọchị
Ebe ọ bụ nayia ukoegwuregwu dị mman'ihi na ogologo oge (ya bụ, ihe dum ụbọchị) nwere ike ụfọdụ ọjọọ pụta, ọ bụ ezi echiche na-enye gị ara a ezumike. Iji mee ka ara gị na-akwado ma na ahụ gị dị mma, Luciana Sena na-atụ aro ka ọ dị mma.Mar 17 2021
Enwere m ike iyi naanị braị egwuregwu ka yoga?
ReguhaziỌ dị mmabụ mgbe niile nhọrọ na-ezighi ezi maka ụdị mgbatị ọ bụla, ee ọbụna makayoga. Dị ka o kwesịrị, ịhọrọ nke ziri eziỌ dị mmamaka mgbatị ahụkwesịrịbụrụ nzọụkwụ mbụ. Mgbe gimeemgbatị niile na ịgbatị, ịchọghị ịkwa ụtayiihe okpuru mmiriỌ dị mmana pokes ị ebe a na ebe ahụ.7 ụbọchị gara aga
Bolu! Ka a pụọ. Enweghị efe ara. Ndewo, Abụ m Hannah Witton.
Enwerem nnukwu ara ma m gaghị eyiri bra dị otu izu. Enwere m ike ịhọrọ izu kachasị njọ iji mezue nsogbu a n'ihi na ihu igwe na-ekwu na ọ ga-eme ka ọ na-ekpo ọkụ na, oh nwa. Echiche nke ime a bra-less week in winter, Echere m na ọ bụ kemaneeji, n'ihi na m ga-dị nnọọ na-eyi a otutu baggy uwe, na-ha ọkụ, ọ dịghị onye ga-enwe ike na-ekwu ya, super ọma, mma, but in ndaeyo amaghi m ihe m ga eyi.
Ejiri m uwe ura abali m ugbu a. N'eziokwu, m na-arụ ọrụ n'ụlọ naanị taa, mana m ga-apụ n'èzí ma gbaa ọsọ, enwere m ike ịpụ ebe ahụ? Amaghị m. Gịnị bụ ọnọdụ ha n'akụkụ ara? mba eche m na anyi di nma anyi ga ahu.
Ozokwa, ee, m tinyere bra m ka m wepụ ya maka edemede a yabụ enwere ọtụtụ ihe kpatara m ji eme nke a. Nke mbụ, n’ihi na achọrọ m ịma ihe ịma aka nke onwe m. Nke abuo, iji gosiputa na o siri ike ghara iyi akwa bra mgbe inwere nnukwu ara.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a. Nkasi obi; Nri dị arọ. Nnukwu ara dị arọ naanị ma ọ bụrụ na ha anaghị anọgide na-ada ma na-agagharị, na -emepụta ihe egwu, na-akpata nsogbu ahụike.
Bras dị mma maka nke a. Nke abụọ, aesthetics. Ara m na adi nma mgbe ha dicha ma bulie ya elu.
Ha anaghị ele anya na-ekpo ọkụ mgbe a hapụrụ ha aka ha. Ihe nke atọ mere m ji eme nke a bụ ntakịrị ihe ịma aka nke ejiji n'ihi na achọrọ m ịnwale ụdị uwe m nwere ike iyi ara m na-enweghị bra n'ihi na echere m na m ga-adị oke oke, ọkachasị n'oge ọkọchị. M nwere ụbọchị ole na ole na-eche banyere ya tupu m malitere filming, na m ọgụ na mgba na-etinye ọnụ uwe m na isi nke ihe m ga-eyi. n'ihi ya pajamas ruo ugbu a.
Ihe ọzọ ikwesiri ịma bụ na n’okpuru ọsụsọ ara m na-adị njọ, dị njọ, dị ka mmiri mmiri, n’ihi na ara na-atụgharị ma dị ka okpuru ebe ha metụrụ akpụkpọ m aka, ọsụsọ. Ya mere, mgbe m nwere ajirija obi, gịnị ka m ga-eme? Ozugbo m matara na ọ nọ ebe ahụ, m ga-ewere ihe na-esi ísì ụtọ ma dị ka, shh, shh, n'okpuru ara m, mana maka izu a, m ga-etinye deodorant ala n'okpuru ara m na mmalite nke ubochi, tinye tinye ya na ihe omume nke ututu m. Just uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, window na-emeghe n'okpuru nnụnnụ tit, mana ọ ka na-ekpo ọkụ, m dị mma.
Ahụ́ ruru m ala. Enwetụbeghị m boob ajirija yabụ enwere ike ịdị m, oh deodorant. I mean na i na aru oru na olulu m kedu ihe kpatara ojum ji ju gi anya na i na aru oru n’elu nnem.
Nke ahụ bụ n'ezie rhyme na mberede. Ana m ekwoso ndị nwere obere ara ara na-enweghị ike iyi bras ma ọ bụ ndị nwere ara ara na-eyighị ọla aka ha ama. Oh Chukwu m kedu ihe m ga-enye ka m were akwa na-enweghị azu Na nsogbu niile nke ụwa, nke a ga-adị ka ọ bụ ihe na-enweghị isi, mana nke ahụ gbasara mụ na ụmụntakịrị m na ụwa ịkụ ọkpọ, ọ na-ewute m n'ezie mgbe ndị mmadụ kwuo kedu ka ha si ekwo ụra m na na ha na-achọ, ị nwere ara buru ibu dịka m.
Ma ọ bụrụ na enwere ọchịchọ a na nnukwu ara dị mma karịa obere ara, ndị mmadụ yiri ka ha na-eche otu a, m dịkwa ka ya, mana ọ bụ gị? N'ihi na ụdị ọ bụla, otu ama ama na m na-ahụ na fim, onye ọ bụla na TV, anaghị m ahụ ndị nwere nnukwu ara ebe ọ bụla. Anaghị m ahụ ya. Naanị oge m na-ahụ nnukwu ara bụ ma ihe nlereanya ma ọ bụ onye ama ama buru ibu ma ọ bụ buru ibu.
Adị m gịrịgịrị na nnukwu ara, site na akụkọ m nwetara, ọ dị mma ịdị gịrịgịrị na obere ara. Ọ bụ ya. Ikekwe naanị ebe ị ga-ahụ ebughibu na nnukwu ara bụ porn, kamakwa, ọtụtụ porn m na-ele bụ obere ara.
Obere ara! Obere anụ arụ ịnyịnya ibu! Ha, ebe ahụ ka nkụda mmụọ m si pụta .Enwere m ọtụtụ ndị enyi na ndị mmadụ n'otu aka, ana m agwa onwe m na m nwere ahụ nwanyị a mara mma ma, na aka nke ọzọ, adị m ka, mana anaghị m ahụ ya ma ọlị, anaghị m ahụ ahụ m ebe ọ bụla, amakwaara m na m dị gịrịgịrị amaara m nke ahụ, mana anyị na-ekwu okwu banyere ara ebe a. (Singing) Na agbanyeghị, m na-eche na nnukwu ara ara anaghị arụ ọrụ na ị ga-ahụ ihe kpatara m ji chọọ bra a n'izu a.
Ekwesịrị m ịpụ apụ ka m yikarịrị ka m ga-eyi obere uwe m dịka pajamas. Anyị ga-ahụ otu izu a si aga m nwere ike ịgbagide taa. M na ihu ọma dị nnọọ yi a vest top na bụ a staple nke m, ma na-enweghị a efe ara.
N’ikwu eziokwu, echeghị m na ọ dị njọ. Naanị ihe bụ n'ihi na m na-eyiri akwa akwa mgbe niile na n'elu nke m dị mkpụmkpụ ka m wee nwee afọ. Ara dị ka ọ karịrị, dị ka ọfụma n’elu elu jeans m (ịchị ọchị). bụ mkpụmkpụ, enweghị m afọ.
Dị ka a ga-asị na ị na-eyi bra, m ga-enwe ma ọ dịkarịa ala anụ ọhịa ma ọ bụ abụọ tupu anyị eruo n'ụkwụ. Ma na ara ara m enweghi ike inwe ọkara ọkara f. Ọ bụ naanị igbe, mgbe ahụ ụkwụ.
Mana m ga-eyi nke ahụ ma rah. Ma na ọ dịghị onye ga-achọpụta. Anọ m n'ụzọ nkịtị n'elu obi m. (Ọchị kwa, echefuru m ikwupụta na intro m nke ọ bụ, mgbe m na-arụ ọrụ, m na-eyi akwa bra.
Nke ahụ bụ e wezụga. Agaghị m eyi efe ara maka oge niile, mana m na-eyi bra nke egwuregwu maka mgbatị n'ihi na ọ bụ ezigbo ihe egwu Ọ dị mma, ka anyị pụọ n'èzí, yay! (egwu dị egwu) m batara n'ụlọ ma ọ dị mma, mana enwetụbeghị m ara. Enwere m mmetụta nke ịmara onwe m nke ọma ma jiri obi eziokwu kpuchie ya, echeghị m na ọ dị njọ.
Ọsụsọ na-agba n’awara m n’ihi na enweghị m bra ị ga-adọpụta ha. Naanị ọsụsọ dị n’igbe ahụ na-eme. Ma karia nke ahu, odighi njo.
Mana ọ ga-akara m mma iyi bra, n'eziokwu. Lee anya na nke ahụ. N'ezie, ị maara ihe, lee n'akụkụ a.
Nke ahụ dị mma, lelee nke a! Gịnị mere ha ji adị obere karịa n'akụkụ? Amaghị m ihe nke ahụ bụ maka. Site n'ihu, agbanyeghị, ọ dịka huah, agbanyeghị. N'ihi ya, m nwalere ihe a nke gbanwere ihe niile.
Nke ahụ bụ otú m si eyi ya, da ta la, ya na ọsụsọ m n’ara. Ya mere, echere m, ọ dị mma, gịnị ma ọ bụrụ na m bulie obi m elu iji nweta akwa ahụ? site n'elu ka isi banye n'etiti ebe ara na ezute akpukpo aru m. Yabụ mgbe anyị mere nke ahụ, mgbe anyị mere obere nnwale, ọ bụ ụdị dị iche.
Oh nwa nwoke, nke ahụ jupụtara na mkpochapu, mana ya, anyị na-eme ka elu m dị ka bra. Ma mba, nke ahụ bụ mba. Oh chim i mara ihe m mutara bu ihe ahu? You nwere ike ịhụ n’ara ara m ka a na-akpado anyị.
Can't nweghi ike inwe nwunye, mba, ee, i nwere ike ihu ara m 100% nihi oku. Nri, (chịrị ọchị), nri, ihe ọ bụla. Laghachi na nkịtị.
Jesus iberibe Christ. (egwu dị egwu) ọ bụ ụbọchị nke abụọ ma anyị nwaa uwe. Uwe a bụ n'ezie onyinye sitere na Poche Posh.
Ha bụ ụmụ nwanyị nwe ụlọ ahịa na-eji ejiji na akpa! O wee rute ka m chere na m ga-anwa ya ma anaghị m eyi ụdịrị ugbu a, m dị mma, amaara m ihe nke ahụ yiri bra na, yabụ akụkụ m n'isi m, oh o dicha ezigbo mma. Ma ọ bụrụ na ịnweghị ntụnyere ị na-achọghị, n'ụzọ nkịtị ihe dị njọ n'emeghị bra. Achọpụtakwara m otu a n'ihi na ọ na-abịa elu ebe a, yabụ na anyị enwetaghị akụkụ dị n'akụkụ, enweghị ọnọdụ mmịfịa ma ọ bụ ezigbo ihe.
Enwere m olile anya na agaghị m enwe ọsụsọ, ma enwerekwa eriri mmiri a nke doro anya ebe ara m kwesịrị ịnọ n'elu. Yabụ m ga-adọrọ ya na usoro a. (chị ọchị) Nke ahụ dị ezigbo mma.
Taa, m ga-aga nzukọ ma aga m aga ebe a na-eme ihe nkiri n’abalị taa. M na-apụ apụ, anaghị m arụ ọrụ. Mana anyị na-apụ apụ ma hụ ndị ọzọ.
Echere m na nke ahụ ga-ezuru. Nke ahụ na-anakwere. Adị m mma n'anya! Kedu ihe mere ara m ji adị obere mgbe ha anọghị na bra na n'akụkụ? O juru ya anya. nke a bụ uche m. nke a bụ ihe m hụrụ. hello ụkwụ. (ọchị) (egwu dị ndụ) Gbanyụọ maka ụbọchị / mgbede.
Ọsụsọ na-arụzi m ọrụ, ma ugbu a, oyi ajụla m. Ya mere, anyị ga-ahụ. Ma m ka hụrụ ya n'anya, ka na-ahụ ya n'anya. (Ìgwè mmadụ chats) (ọchị) - hey! Nke a bụ nnukwu oriri na ọ !ụ !ụ! Ọ na-eyighị uwe bra! (Egwu na-egwu egwu) na-eche na ụbọchị nke abụọ gara nke ọma na m gara apụ, anọ m na nnọkọ oriri na ọ partyụ andụ ma enwere m ọfụma.
Echere m na naanị ejighị n'aka na m ka nọ. Echeghị m na m ga-enwe ahụ iru ala, dị ka foto anụ ahụ zuru oke, mana anyị na-enwe ọganihu. N'ihi na ụnyaahụ gara nke ọma, enwekwuola m obi ike.Taa, m na-eyiri ihe ọkụkụ na-apụ n'ubu, nke m na-eyikarị ka nke a (pịa ire) ma ọ bụ naanị m ga-anagide ya eziokwu na m efe ara straps na-gosipụtara na a akuku n'elu gbakwunyere na abịa na ala.
Ana m aga spa. Ana m ewepụ ụbọchị ahụ. Enwere m nnukwu ọrụ na June, Mee, na ịkọ onwe m azụ iji dee akwụkwọ m na mbipụta The Hormone Dia ries, agara m spa .Ọ ga-abụ na m ga-anọ n'ime uwe mwụda / bikini m maka ọtụtụ ụbọchị, ma nke ahụ bụ ekike.
Ọ na-edobe ara anyị. Ka anyị hụ ihe ga-eme mgbe m weliri aka m elu. Lee ka o doro anya na anyị dịkwa mma ọ dị mma.
O doro anya na ọ ka dị ala karịa ka ọ ga-adị, mana m nọ, m nọ. M wee nwee nnukwu. M ka nwere deodorant m n'okpuru nnụnnụ tit.
Ah, ekwesịrị m weta bra ka ọ bụrụ na m na uwe ime E ga-agagharị? No, M ga-ekwe ka m nnụnnụ tit si, dịkwa mma. Ọ dị mma. Ma obu n'onu ma obu na bikini m. (Vocalization) Agara m Zumba n'ụtụtụ a na ọ bụ otu n'ime abụ ahụ n'ihi ihe ụfọdụ, Ọ dị mma, m ga-atụ jụụ ụbọchị fọdụrụ (egwu dị ndụ) enwere m ezigbo obi ụtọ ụnyaahụ, naanị na ihe ọkụkụ na enweghị bra, mana ọ bụ naanị ụbọchị dị ezigbo mma ma doro anya na anaghị m ese ihe ọ bụla n'ihi na echere m na m gaghị arụ ọrụ.
Ma ọbụlagodi na bikini, ọ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ị nwere ike iwepu eriri ma ọ bụ na ọ bụghị, n'ihi ya enweghị m eriri na ki na m na-eme ka ọ dị m ka anaghị m eyi efe ara ma Enwere m mgbe m na-egwu mmiri m dọtara eriri. Ma ọ dị mma! Ma mgbe ahụ, agara m sinima na mgbede ma tinye naanị hoodie n'ihi na ọ dị ntakịrị oyi ma ana m adị jụụ. Ọ dị egwu.
Nke a bụ ọnọdụ dị n'ụbọchị nke anọ. Enwere m obi ike, enwere m mmetụta nke ọma mgbe ụbọchị abụọ gara aga, na mgbe ahụ amaghị m. Gịnị kpatara ya? Ọ bụghị mgbe niile ka ihe ọjọọ dị n'ihu igwefoto dị ka enyo / n'isi m? Ebumnuche, ihe ndị a nwere ike ịbụ ihe dị elu nke m nwere, yabụ na anyị nwere nnukwu nsogbu na igbe.
Ọ bụrụgodị na ahụ dị m ezigbo mma ugbu a, ọ naghị adị m mma n’uche. Ọ bara uru? Anụ ahụ dị m mma, mana m ga-eche gbasara ya ụbọchị niile ma ị gaghị eji uwe chọọ ya. Chọghị ka ahụ ghara iru gị ala na uwe, mana ị chọghị iyi akwa nke ga-ewe gị iwe (ịkwa ákwá).
Ah, achọrọ m ịkụnye m n'ime m Chadira na naanị ara ara na-emetụta. Ọ dị mma, mana anyị ga-agbanwe. Mana echere m na anyị ga-ahọrọ mkpokọta Lucy & Yak.
Nke a bụ otu! Bra. Ihe niile bụ naanị dị ka cuddly dị ka ahụhụ na a kapeeti. (Vocalization) Ndị a dungarees sitere na Lucy & Yak.
Top si Lena mgbe ọ gbanwere uwe ọtụtụ afọ gara aga. See hụrụ, o nwere ọtụtụ akwa na akwa na m, n'agbanyeghị na achọghị m ya ọzọ. Anọ m n'abalị ikpeazụ n'abalị Aladdin! Wayzọ ♪ Taa bụ ụbọchị ọrụ, nzukọ na nhọpụta ụlọ ọgwụ.
Ya mere (n’olu dara ụda) Enwere m obi ụtọ, adị m mma! Enwere m olile anya na oke ọkụ anaghị ekpo ọkụ. Ma m tinyere deodorant n'okpuru ara m, ya mere (pịa). Anọ m na bras, anọghị m na bra.
N'ime uwe niile dị ugbu a, ọ bụ nke a na-eme ka ara m daa. Ọ dịka (ire ọkụ na-eme ngwa ngwa) mana ọ dị mma. Ọ dị m ka dungarees ahụ na-enyere m aka inwe ntụkwasị obi karịa ma ọ bụrụ na m yiri uwe a.
Nke a dị n'elu tọghatara. Ọ dịka m na-aga n’elu maka ụgbọ elu na ụbọchị njem. Ya mere, ara dị na-enweghị njide, mana ọ dị m mma. (egwu dị egwu) Dịka m hụrụ ọnọdụ a n'anya, ọ na-adị egwu ma tọpụ.
Mgbe m na-ebu obere akpa m nke dị ebe a, ya mere o kewara ara m karịa. Ka m na-aga n’okporo ụzọ, ogwe aka m (na-achị ọchị) kụrụ n’akụkụ obi m. Ọ dị ka woop, enwere m boob.
Ekwesịrị m ịbịa n'ụlọ ọgwụ m ugbu a na ụzọ m na-esi aga ebe a bụ ịgba ịnyịnya ígwè. Enweghị m ike ịgba ịnyịnya ígwè n'ụdị ọnọdụ a. Mana m na-aga mgbatị ahụ ma emechaa, yabụ ugbu a, m na-eyi uwe mgbatị m, nke pụtara ogwe egwuregwu. agbagharala mgbaghara.
Adịla aghụghọ n'ihi na m kwuru na m nwere ike iyi egwuregwu egwuregwu, mana enweghị m ike (ịchị ọchị) gaa njem igwe kwụ otu ebe. Naanị mba, ọ bụghị (ọchị). (egwu dị ndụ) Ọ bụ ụbọchị nke ise, ngwụsị nke ụbọchị ahụ ma enwere m uwe Poche Posh ọzọ nke enyere onyinye.
Ọ gara nke ọma ụbọchị nke ọzọ mgbe m na-eyiri cactus uwe na ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu taa ka m chere na m na-eme ya yana enwere m nnukwu obi, ọ na-esiri m ike inweta nnụnnụ tit na m n'ihi na o doro anya na nke a bụ otu Nzube nke isiokwu. Ọ bụ naanị na adaba. Enweghị m atụ anya ịga site na ebe m nọ na mbụ n'izu a.
M na-eme ugbu a. Enwere m ike ịga n'ihu na-eyi bras, mana echere m na m ga-enwe ọtụtụ ụbọchị na-eyighị bras. Anyị ga-ahụ n'ụgbọ okporo ígwè na Manchester maka ngwụsị izu iji hụ ezinụlọ m.
Mgbe nke ahụ mere, m ga-achọ ịma ma nne m mara. Aga m na-emelite gi ma oburu na o choputaghi na m yiri bra na gini? ọ na-ekwu. Echere m na m na-ekwubiga okwu ókè n'agbanyeghị na ọ hụghị ma ọ chọghị ịma, mana anyị ga-ahụ.
Itughari, itighari, itighe, itighe, itigha, oh chi. Echere m na oburu na imaghi ihe m na adi ka, i nwere ike ikwu ya, inwere ike ikwu ya, a gam aga manchester now, ndewo. - Ndewo enyi. - Gini ka ikwuru m? - you na-eyi efe ara? - Ma ee, asị m mba, kedụ ihe ị chọrọ ikwu? - Uh, amaghị m; Chọrọ ntakịrị agbam ume. (ochi) - Ana m eme ihe ederede ebe m na-eyighi uwe bra ruo otu izu - N'ezie - - na tupu m --- ọ bụghị na ọsụsọ na ihe jọgburu onwe ya? - Mba, etinyere m ihe deodorant n’okpuru ara m - Ehee, ọ hụrụ m n’anya, gịnị kpatara ị na-eme nke a? - Ọ bụ nnwale - Hm, oh, ị maara, na nke a --- ị nwere ike ịsị ya, mana ị nweghị ike? - Oh chi, ozugbo.
M just-- - Ee. - Saw-- (chịrị ọchị) Gịnị mere ara gị ji dị iche. - Ihe na - eme - (ọchị) N’ebe ahụ ka ị ga.
Ndị mara, mara. - O doro anya. (ọchị) - Ya mere, anyị na-aga, eyiri m bra maka otu izu (ụkwara), ụbọchị ise ma ozugbo ọ gwụchara, etinyeghachi m bra, ee, m mere. (Na-eze ume) Anyị chere na anyị ga-enwe ọganihu, mana oge m nwere ike ịghachite bra, emere m.
Ugbu a, m na-eyi a bra na m hụrụ ya n'anya. Ọ ga-ewe m iwe ma ọ bụrụ na anaghị m eyi efe ara? adịghị mma n'anya. Nkasi obi, dị mma, ọ bụrụhaala na ọ naghị ekpo ọkụ.
Deodorant n'okpuru ara, maka ọsụsọ, nwere mmetụta dị oke, mana ọ na-arụ ọrụ. Gịnị ka anyị mụtara? Ọ bụghị ọtụtụ, amaghị m. (chị ọchị) Ime ihe n'eziokwu, agaghị m na njem ime mmụọ buru ibu ị hụrụ n'anya n'anya m.
Sagging ara dị mkpa, tufuo nke onuara, na-ere ọkụ bras. Njem ime mmụọ a emeghị. Mana echere m na oge karịa mgbe m na-arụ ọrụ site n'ụlọ naanị m, enwere m ike ịbụ onye na-enweghị bra maka ọtụtụ n'ime ha.
N’ikwu eziokwu, etu m si ese vidio ugbu a, ọ ga-abụ n’ezie ka m ga-eyi bra maka na ihe niile dị otu ahụ? ọ fọrọ nke nta ka ọ daa n’ala ebe igwefoto na-ebelata agbanyeghị, yabụ kedu ihe ị kwesịrị ịma. Mana m ga-ekwu na o juru m anya. Echere m na izu a ga-abụ ọdachi ma sie ike karịa ka ọ dị.
Ọ bụghị dị ka arọ dị ka m tụrụ anya na e nwere ọtụtụ dị iche iche ekike nhọrọ na m nwere ike na-eyi ke ndaeyo kwa. Daalụ maka ile anya. Biko nye edemede ahụ isi mkpịsị aka ma ọ bụrụ na ị masịrị ya, ọ ga-amasị m ịnụ na ihe ndị a kwuru ma ọ bụrụ na ị bụ eriri bra, ọ bụrụ na ị bụ onye nweere onwe ya.
Ebee ka ikwuru? Na-amasị gị, ooh, mba, enweghị obi pl pl Simple or just sports bras or i tie? Kedụ ka ọnọdụ gị siri dị ebe a? Echefula ịdenye aha na pịa ngosi na m ga-ahụ gị na m ọzọ isiokwu. Ehee! ♪ Nnukwu, obere, ụfọdụ ndị buru ibu dị ka isi gị Jiri nkwojiaka ha tụgharịa ha ♪♪ Nke ahụ bụ ihe onye showman kwuru, hey ♪♪ Enwere m ọmarịcha okpokoro nke coconuts ♪ (ire ahịhịa)
Cycgba ígwè ọ na-abawanye ogo ara?
Omume aerobic - dị ka ịrị steepụ,ịgba ígwè, na ike ije - nwere ike ime ka ngwa ngwa metabolism gị ma nyere gị aka idalata abụba niile. Ike ọzụzụ omume dị ka pushups nwekwara ike ụda olu ma gbanwee ọdịdị nkeara.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eyi bras?
Ị kwesịrịeyiegwuregwuỌ dị mman'oge ọ bụla ọrụ na-akpata ara ije nke na-agụnye ụdị nile nkeịgba ígwèna igwe kwụ otu ebe. Dị ikeịgba ígwèna igwe kwụ otu ebe na-ebute oke ara, nke na-eduga na ahụ erughị ala ma na-agbatị ma na-ebelata ya ngwa ngwayiegwuregwu kwesịrị ekwesịỌ dị mma.29.09.2020
Anyị enwere ike ịwụ uwe bra maka ọrụ kwa ụbọchị?
Ọbụghị naanị oke makammega ahụ. Ọtụtụogwe akadị ebube makana-eyi kwa ụbọchịma ọ bụrụ na ị na-eme nhọrọ kachasị mma n'ụdị, nha na ọkwa dị egwu. Otu uru dị ịtụnanya bụ naogwe akasitere na akwa mmiri na-ekuru, ume iku ume. Eriri naogwe akaEzubere ka ọ dịrị.16bọchị 16 2018
Kedu bra ka mma egwuregwu ka ọ bụ nkịtị?
Ọ dị mma-ozuru okeogwe akaEzubere iji megharia mmeghari na ka ị na-aga, ha ga-enye nkwado kachasị ma jide ara gị aka.Bras mgbe nileenyela nkwado zuru oke, nwere ike ibute esemokwu n'ubu, ma nwee ike ịmịkọta ajị ajị.15 nke Dec 2019
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anyị emega ahụ na - enweghị bra?
Ọtụtụ mmadụ na-echegbu onwe hana-emega ahụna-enweghịỌ dị mmaga - eme ka ihe jikọrọ anụ ahụ dị na ara gị wee mee ka ha saghaa, ọ na - ekwu. Ọ bụ ezie na anụ ahụ nwere ike ịgbatị ogeọ bụrụị dịghị eyi aỌ dị mmaịrụ ọrụ, otumgbatị na-enweghịkaỌ dị mmaagaghị eme mgbanwe ọ bụla dị mkpa.
Enwere m ike iyi naanị egwuregwu bra gaa mgbatị ahụ?
Mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-arụ ọrụ n'ime ụmụ agbọghọ niile na amgbatị ahụ, Meyi naanị egwuregwu brayana otu ime bikini. Karịsịa na ụbọchị anwụ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ. Ya merena-eyi naanị egwuregwu bran'imemgbatị ahụdị ezigbo mma!
Kedu ụdị bra m kwesịrị iyi maka ịgba ịnyịnya ígwè?
Nke mbụ, kpebie ụdị nkwado ị chọrọ. Maka ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ, bra na nkwado dị ọkara ga-eme ka ahụ ruo gị ala karịa ihe mgbochi bra dị mkpa maka egwuregwu dị egwu dị ka ịgba ọsọ.
You chọrọ uwe egwuregwu maka ịgba igwe n’elu ugwu?
Ka anyị chee ya ihu, bra egwuregwu abụghị ihe ịzụ ahịa metụtara ịnyịnya na-atọ ụtọ nke ị ga-eme, mana ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa. Wearingghara iyiri bra dị mma maka ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ na ịgba ịnyịnya ugwu nwere ike imebi anụ ahụ ara, na-akpata ihe mgbu na, ka oge na-aga, ara gị agaghị agbada ọzọ.
Kedu egwuregwu bra kacha mma maka ụmụ nwanyị?
Ndị a bụ 10 n'ime bras egwuregwu kacha mma maka ịgba ígwè. 1.Nike Women's Contour Bra -… »Enwere 0 kwuru. Tinye nke gi. Zoo ha. Biko tinye email gị ka anyị nwee ike imelite gị na akụkọ, njirimara na onyinye kachasị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị, ị nwere ike wepu aha gị n'oge ọ bụla.